Ndị ụgbọ elu Uganda agbapụla A330neo ọhụrụ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ndị ụgbọ elu Uganda agbapụla A330neo ọhụrụ
Airlines • Aviation • News • Iwughachi • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Ndị Uganda hụrụ nke mbụ n'ime ha abụọ Ndị ụgbọ elu Uganda A330neo ugbo elu - ndị A330-800 - na-apụ site na mbara ezi mgbe ejiri akara na agba mba. Edere nke a na ibe AirbusNeo330 facebook na-akpali nzaghachi euphoric na soshal midia.
Otu ozi tweet na gọọmentị ụgbọ elu Uganda kwuru, sị, "N'oge na-adịghị anya General Wamala (Minista Ọrụ na Transportgbọ njem na Uganda) ga-eduga ndị otu na France ịchụpụ nnụnụ ahụ."
Tupu mkpọchi na mmechi nke ọdụ ụgbọ elu International nke Entebbe n'ihi ọrịa na-efe efe COVID-19, ụgbọ elu ahụ na-efega Nairobi, Mombasa, Dar es Salam, na Mogadishu ma zubere maka ọdụ ụgbọ elu Harare, Kigali, Zanzibar, na Kilimanjaro dị ka akụkụ nke mpaghara ya ebe njedebe.
Uganda Airlines na-ezube iji A330-800 iji wuo netwọkụ ya na ogologo ọdụ ya na ụgbọ elu na-enye teknụzụ na-enweghị atụ yana arụmọrụ ndị ọzọ. Nke a ga - agbakwunye n'ụgbọ mmiri anọ nke Bombardier CRJ 900 Atmosphere cabin ụdị nke enyere iwu tupu mmalite nke ụgbọ elu ahụ na Eprel 2019.
Cornwell Muleya, onye isi oru nke ụgbọ elu Uganda, kwuru na ha nwere olile anya ịnata ụgbọelu ahụ buru ibu site na Disemba, obere oge site na atụmatụ mbụ nke Ọktoba 2020 - na-ebute mmalite nke ụgbọ elu mba ọzọ na-esote afọ. Muleya kwuru, "Anyị na-eche na anyị ga-enweta ụgbọ elu ahụ na nkeji iri abụọ na ise nke afọ, opekata mpe ọnwa Disemba, ka anyị nwee ike ịmalite ọrụ anyị n'isi mmalite afọ ọhụrụ."
Enweghi obi abụọ ma a ga-ekwenye na iwu ndị ahụ dịka ọrịa ọrịa COVID-9 nwere njem mba ụwa na-aga ịkwụsị.
Otu o sila dị, Maleya na mkparịtaụka mbụ nke ndị nta akụkọ tupu otu afọ ncheta kwuru na ụgbọ elu ahụ ga-aga n'ihu yana atụmatụ ya itinye akara na mpaghara Afrika na gafere.
"Atụmatụ anyị na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu (na ihe anyị mere) na mbido - na mgbakwunye na ịzụlite mpaghara mpaghara nke anyị mepụtara itoolu, anyị ka nwere ndị ọzọ ole na ole iji ruo iri na asatọ ma ọ bụ iri abụọ anyị chọrọ Africa. Anyị kwuru na anyị ga-agbatị netwọkụ ahụ gaa na mba ndị ọzọ; anyị chọrọ ịga London, anyị chọrọ ịga Dubai, anyị chọrọ iji A330 gaa Guangzhou. Dị ka mmalite, anyị chọkwara ijikọ na West Africa na Southern Africa ebe ikike a chọrọ. "
Ejiri ụgbọelu Airbus, nke A330neo, ga-eweta uru dị ukwuu nye ndị ụgbọ elu Uganda na ndị ahịa ya, na-enye arụmọrụ na-enweghị atụ jikọtara ya na ụlọ nke oge a.
The A330neo bụ nke Rolls-Royce nke ọhụụ ọhụụ Trent 7000 nyere ya ma gosipụta nku ọhụụ ọhụụ ya na ọnụọgụ A350 XWB nke ọhụụ. Thelọ ahụ na-enye nkasi obi nke ihe eji enyere ndụ aka na ọdụ ụgbọ elu ọhụụ gụnyere usoro ihe eji eme njem ọhụụ na sistemụ njikọ Wi-Fi, na ndị ọzọ.